Ubuntu 18.10 yatove mukusimudzira uye zita rekodhi ndiCosmic Cuttlefish | Linux Vakapindwa muropa
Ingori inopfuura zvishoma kwevhiki yepamutemo Ubuntu 18.04 LTS kuvhurwa, kwemazuva mashoma budiriro yatanga yeiyo inotevera vhezheni yeUbuntu, iyo ichave Ubuntu 18.10 codenamed Cosmic Cuttlefish.
Sevamwe venyu munotoziva Mazita akakosha eUbuntu ane mavara akawedzera. Iwo mazita ekodhi eUbuntu akaderera sezvo vachaziva sei mazita ekodhi izvo zvinoumbwa neshanduro uye mhukaOse anotanga neiyo tsamba, kuwedzera kune chokwadi chekuti mune dzimwe shanduro mhuka dzemungano dzakashandiswa sezita rekodhi.
1 Nezve Ubuntu 18.10 Cosmic Cuttlefish
2 Ubuntu 18.10 Cosmic Cuttlefish maficha
2.1 Kernel 5.0 paUbuntu 18.10
2.2 Communitheme senge default theme
2.3 Nyowani yekumanikidza algorithms ichawedzerwa
3 Dhawunorodha Ubuntu 18.10 Mazuva ese Inovaka
Nezve Ubuntu 18.10 Cosmic Cuttlefish
Parizvino chete zvishoma zvishoma zvinozivikanwa nezvazvo yeiyi nyowani vhezheni yeUbuntu iyo yatanga chikamu chayo chekuvandudza.
Zuva racho mairi ichavhurwa zviri pamutemo hazvizivikanwe, asi sezvo vazhinji venyu muchiziva Ubuntu yakaburitswa muna Kubvumbi naGumiguru.
Kunyangwe zuva racho risingazivikanwe, isu tinogona kutaura kuti ichave nekuburitswa pakati pe3 kana 4 vhiki yemwedziIzvi zvinoenderana nezvakaburitswa zvekare uyezve kuti kuburitswa kweshanduro dzakatsiga idzi hazviitike mazuva ekutanga emwedzi.
Iye zvino Inofungidzirwa kuti ichave iine nguva yemasvondo makumi maviri nemashanu ekuvandudza, Kunze kwezvo, iyi vhezheni itsva ichasiyana kubva kune vamwe maererano nechikamu ichi.
Ndiri kureva izvo Ubuntu 18.10 Cosmic Cuttlefish haizove neAlfa kana Beta vhezheniKana zvisiri, ikozvino ichave nekubuditswa vhiki kana kuwedzera kana tichida kuzviona nenzira iyoyo.
Ubuntu 18.10 Cosmic Cuttlefish maficha
Pari zvino yekutanga Mazuva ese Inovaka iyo yatinogona ikozvino kurodha pasi, isu tinogona kuona kuti Gnome inoenderera seyakagadzika desktop desktop.
Uye unofanira kuziva izvozvo Gnome ichaburitsa vhezheni itsva yakagadzikana munaGunyana 18 yegore rino, saka Tinogona kuona kuti Ubuntu 18.10 ichave neGnome 3.30 senzvimbo yedesktop.
Izvi zvinoita kuti ive mukwikwidzi akakodzera kuburitswa Ubuntu 18.10. Mazhinji ekuonekwa uye akavanzika shanduko muGNOME 3.30 ichaonekwa zvakare muUbuntu 18.10.
Kernel 5.0 paUbuntu 18.10
Nezve moyo weiyo system, isu tinozivawo izvozvo iyo Linux Kernel ichave ichisvika vhezheni 5.0 mune imwe nyaya yemwedzi mishoma, ichiita mukwikwidzi akakwana wesystem nyowani iyi kuburitswa.
Communitheme senge default theme
Vazhinji venyu munotoziva Communitheme nekuti zvaizivikanwa kuti ichi chichava chinyorwa chitsva muUbuntu 18.04 sezvo ichatsiva iyo Ambiance theme iyo yanga ichishandiswa kwemakore muchirongwa.
Zvakanaka zvino ko kana yakasimbiswa ndeyekuti Communitheme ichave iri nyowani default theme.
Nyowani yekumanikidza algorithms ichawedzerwa
MuUbuntu 18.04 vagadziri vakashanda zvakanyanya kuti vakwanise kumhanyisa system uye nekuvimbisa kuita kwakanakisa nekuti mumashoko avo iyi vhezheni ichadzivirira izvo zviri zvipingamupinyi muhurongwa.
Neichi chikamu chakashanda, mukuburitswa kunotevera nyowani yekumanikidza algorithms LZ4 uye ztsd iri kugadzirirwa, Izvo zvauchabatsirwa nazvo nekutora iyo system 10% nekukurumidza. Izvo chaizvo iri nhau dzakanaka kune vese vashandisi veUbuntu.
Mazuva mashoma apfuura nhau dzakaziviswa nezve kusiiwa kwekutsigirwa kwemakumi matatu nematatu ekuvakwa nemamwe mavhenekeri eUbuntu akadai saMate naBudgie.
Saka mukuburitswa zviri pamutemo kweUbuntu nemafuta ayo izvozvi panenge paine zvishoma zvicharamba zvichitsigira izvi.
Dhawunorodha Ubuntu 18.10 Mazuva ese Inovaka
Kana iwe uchida kubatana pamwe nekuvandudzwa kwesystem mukuona kwekukanganisa kana kuda kuteedzera pane iyi nyowani vhezheni, unogona kurodha pasi zuva nezuva mufananidzo kubva Iyi link.
Iyo yekubatanidza yanga ichichinja kwemazuva mashoma apfuura saka ini ndinopa zano kuti kana pasisipo iwe tanga utore madhairekitori mashoma kutanga.
Sekutaura wega, ndinogona kutaura kuti izvo zvaburitswa zvakakurumidza kunyangwe neshanduro nyowani nyowani, kunyangwe iyi nyaya yatove nekukurukurwa, ichiri kupokana nevashandisi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Ubuntu 18.10 yatove mukusimudzira uye zita rekodhi ndiCosmic Cuttlefish
Iri zita repamutemo reUbuntu 18.10 harisi "Cosmic Canimal", iri "Cosmic Cuttlefish": http://www.markshuttleworth.com/archives/1521?anz=show
Pindura kuna @beoxman
Kutenda neruzivo, ini zvakare ndakatarisa zvinoitwa zvezuva nezuva uye ini ndakangoona imwe dhairekitori yeCuttlefish, ini ndinogadzirisa ruzivo.
Kana iko kuremara kuripo kwekusakwanisa kugadzirisa linux kana kurodha mapakeji kubva kuchikamu chekutonga kana uri kushandisa Wi-Fi Internet ichagadziriswa.
Iine Windows hapana muganho wakadai, kunyangwe iwe uchishandisa tambo kana Wi-Fi.
Ubuntu vhezheni 18.1 zvakare haina kuunza chero chirongwa chekuona vhidhiyo kana mafirimu
Iyo haigone kuburitsa dhairekitori muti, inongounza chete inoenderana chikamu chemafolda
mushandisi we admin